Bible Mu Nsɛm Ɔne Ɔbea no wɔ Abura no So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
NA YESU akɔtra Samaria abura bi so rehome kakra. Na n’asuafo no kɔ kurom rekɔtɔ aduan. Na ɔbea a Yesu ne no rekasa no aba abura no so rebɛsaw nsu. Ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: ‘Ma me nsu no bi nnom.’
Eyi yɛɛ ɔbea no nwonwa. Wunim nea enti? Efisɛ na Yesu yɛ Yudani, na ɔbea no yɛ Samariani. Na na Yudafo pii mpɛ Samariafo asɛm. Na wɔne wɔn nkasa mpo! Nanso na Yesu dɔ nnipa nyinaa. Enti ɔkae sɛ: ‘Sɛ wunim onipa a ɔresrɛ wo nsu no a, anka wo nso wubebisa no na wama wo nkwa nsu.’
Ɔbea no kae sɛ: ‘Owura, abura yi mu dɔ, na wunni bokiti mpo. Ɛhe na wubenya nkwa nsu yi?’
Yesu kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: ‘Sɛ wonom abura yi mu nsu a, nsukɔm bɛde wo bio. Nanso nsu a mede mɛma wo no betumi ama obi atra ase daa.’
Ɔbea no kae sɛ: ‘Owura, ma me saa nsu no bi, na osukɔm anne me, na mamma ha mammɛsaw nsu bio.’
Ná ɔbea no susuw sɛ Yesu reka nsu paara ho asɛm. Nanso na ɔreka nokware a ɛfa Onyankopɔn ne n’ahenni ho no ho asɛm. Saa nokware yi te sɛ nsu a ɛma nkwa. Ebetumi ama obi anya daa nkwa.
Afei Yesu ka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: ‘Kɔfrɛ wo kunu bra.’
Ɔbea no buae sɛ: ‘Minni kunu.’
Yesu kae sɛ: ‘Woaka nokware. Nanso woaware kununom baanum, na nea wo ne no wɔ hɔ seesei no nyɛ wo kunu.’
Ɛyɛɛ ɔbea no nwonwa, efisɛ na ne nyinaa yɛ nokware. Ɛyɛɛ dɛn na Yesu huu eyi? Efisɛ na Yesu ne Onii a Onyankopɔn Ahyɛ Ne Ho Bɔ sɛ ɔbɛsoma no aba no, na Onyankopɔn na ɔdaa nsɛm yi adi kyerɛɛ no. Saa bere yi Yesu asuafo no san bae, na ɛyɛɛ wɔn nwonwa sɛ na ɔne Samariani bea rekasa.
Dɛn na yesua fi eyi nyinaa mu? Ɛkyerɛ sɛ Yesu yam ye ma nnipa nyinaa. Na ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa ara. Ɛnsɛ sɛ yesusuw sɛ nnipa bi yɛ nnipa bɔne esiane sɛ wofi ɔman pɔtee bi so nti. Yesu hwehwɛ sɛ nnipa nyinaa hu nokware a ɛde kɔ daa nkwa mu no. Na ɛsɛ sɛ yɛn nso yenya ɔpɛ sɛ yɛbɛboa nkurɔfo ma wɔahu nokware no.
Adɛn nti na Yesu kɔtraa Samaria abura bi ho, na dɛn na na ɔreka akyerɛ ɔbea bi wɔ hɔ?
Dɛn na ɛyɛɛ ɔbea no nwonwa, dɛn na Yesu ka kyerɛɛ no, na adɛn ntia?
Nsu bɛn na na ɔbea no susuw sɛ Yesu reka ho asɛm, nanso na ɔreka nsu bɛn ho asɛm ankasa?
Adɛn nti na ɛyɛ ɔbea no nwonwa sɛ Yesu nim no ho asɛm, na ɛyɛɛ dɛn na Yesu hui?
Nneɛma bɛn na yebetumi asua afi ɔbea a na ɔwɔ abura no ho no asɛm no mu?
Kenkan Yohane 4:5-43.
Su bɛn na ɛsɛ sɛ yɛda no adi wɔ nnipa a wofi aman foforo anaa tebea soronko mu de suasua Yesu nhwɛso no? (Yoh. 4:9; 1 Kor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tito 2:11)
Sɛ obi bɛyɛ Yesu suani a, nhyira bɛn na onya? (Yoh. 4:14; Yes. 58:11; 2 Kor. 4:16)
Ɔkwan bɛn so na yebetumi akyerɛ anisɔ te sɛ Samariani bea no a na ne ho pere no sɛ ɔbɛka nea wasua ho asɛm akyerɛ afoforo no? (Yoh. 4:7, 28; Mat. 6:33; Luka 10:40-42)
Ɔkyerɛkyerɛɛ Samariani Baa Bi
Yesu kaa asɛm bi kyerɛɛ ɔbaa no, na na ɔnkaa saa asɛm no nkyerɛɛ obiara da.